Okwute Dutch, Skillets, Grill Pan, Casserole - DINSEN
DINSEN Onye Okike nke ndụ ka mma
Dinsen Impex Corp na-elekwasị anya na mmụba na-aga n'ihu na ihe ọhụrụ maka mmepe cookware mmepe, teknụzụ na n'ichepụta. Ka ọ dị ugbu a anyị na-enye OEM, ODM, na ọrụ ndị ọzọ.
Anyị factory bụ ihu ọma site ISO9001: 2015 & BSCI, na-onwem na DISA-matic mgbatị edoghi na tupu oge mmepụta edoghi, Enamel edoghi, na zuru ule ngwaọrụ. Ekele maka ụlọ ọrụ mmepụta nke oge a, ụlọ ọrụ nchebe gburugburu ebe obibi zuru oke, usoro nrụpụta tozuru etozu, ndị ọkachamara ọkachamara na usoro nyocha zuru ezu, a na-ebupụ ngwa ngwa igwe nri anyị karịa mba 20 na mpaghara, dịka Germany, Britain, France na United States wdg. na anyị wuru elu-okwu usoro imekọ ihe ọnụ na ndị ahịa anyị. Dinsen ga - ejigide ebumnuche nke imeziwanye ndụ mmadụ, na - arụ ọrụ aka na ndị ahịa anyị na ndị ọrụ ibe anyị n'ụlọ na mba ofesi, ịzụlite na ire ndị toro eto, ndị ọkachamara, ndị enyi na gburugburu ebe obibi enamel casting cookers.
DA-C25001 / 29001/33001/37001 igba ígwè elu q ...
DA-DO21001 / 25001/29001 elu mma igba ígwè ...
DA-DO31001 igba ígwè cookware 2020 na-ere ọkụ
DA-DO19001 / 20001/21002/24001/27002/27003 nkedo ...
DA-S24001 esi esi nri eco-omume dị elu
DA-S28002 igba ígwè cookware elu mma
DA-S26001 mere na china nkedo ígwè 2020 na-ere ọkụ
DA-S30001 igba ígwè elu àgwà eco-enyi na enyi
DA-S29001 igba ígwè cookware 2020 na-ere ọkụ
DA-S13002 igba ígwè pre-seasoned 2020 hot sale
DA-S13003 / DA-S16002 / DA-S20003 igba ígwè eco -...
DA-S22002 / DA-S20005 eco-enyi na enyi igba ígwè c ...
DA-BC37001 2020 ọkụ ire cookware mere na c ...
DA-BC26001 / 32001/32002/ 37001/ 37002 igba ígwè ...
DA-BC13001 cookware emere na china 2020 na-ere ere
DA-GP38002 igba ígwè elu àgwà 2020 ọkụ ire ere
Ọnwa Ise 22, 2021
Oké mmiri ozuzo na Henan
N'ime ụbọchị ole na ole gara aga, Zhengzhou, Xinxiang, Kaifeng na ebe ndị ọzọ na mpaghara Henan enweela oke mmiri ozuzo. Usoro a gosipụtara njirimara nke mmiri ozuzo buru ibu, ogologo oge, mmiri ozuzo dị mkpirikpi dị mkpirikpi, na oke oke. Ebe a na-ahụ maka ịchọta ihe mgbe ochie ... / p>
Ọnwa Jun 28, 2021
Dinsen na-eme emume ncheta afọ 100 nke ntọala nke Communist Party nke China！
Otu narị afọ, njem njem na mgbago. Site na obere ụgbọ mmiri na-acha uhie uhie na nnukwu ụgbọ mmiri nke ga-eduga nkwụsi ike na njem ogologo oge nke China, ugbu a, ndị Kọmunist nke China emesịa na-eme emume ncheta ọmụmụ nke otu narị afọ. Site na nnọkọ Marxist nke izizi nwere ndị otu pati karịrị 50, ọ nwere ... / p>